बाबुरामले भने : अब भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग | रक्त न्युज
बाबुरामले भने : अब भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग
मधेशवादी दल जनता समाजवादी (जसपा) औपचारिक विभाजनको विन्दुमा पुगेको छ । ओली सरकारमा सहभागी हुने वा अपदस्थ गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि एक अर्को पक्षलाई कारबाही र बेग्लाबेग्लै बैठक बस्दै आएका नेताहरुले अब औपचारिक विभाजन हुन लागेको स्वीकार गरेका हुन् ।
उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले महन्थ ठाकुर पक्षलाई निष्काशनको चेतावनीसहित सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको म्याद सकिसकेको छ भने ठाकुर–महतो पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलगायत नेतालाई उसैगरी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुवै पक्षका कसैले कसैलाई स्पष्टीकरण दिएका छैनन् बरु आ–आफ्नो बाटो लागेका छन् ।
पार्टी विभाजन हुनै लाग्दा सोमबार विहान ट्वीट गर्दै जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अब ‘भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग’ जाने स्पष्ट पर्नुभएको छ । उहाँले दुनियाँ हसाउन भन्दा हात मिलाएर आ–आफ्नो बाटो लाग्न पनि दुवै पक्षलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
‘अहिलेको राजनीतिक संकट पुरानो विचार,पार्टी र नेतृत्वको सामुहिक विघटनको अभिव्यक्ति हो । नयॉ निर्माण निम्ति पुरानो भत्कनैपर्छ । समयले नयॉ ध्रुवीकरण खोज्दैछ’ डा. भट्टराईले लेख्नुभएको छ, ‘अतः मान्छे तानातान र किनबेचको तमासा नगरौं ! भेडाभेडाँग र बाख्राबाख्रासँग हुन दिऊॅ ! हात मिलाएर आ–आफ्नो बाटो लागौं ! हिँडिरहे फेरि भेट हुनेछ !’
ओली सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेपछि जसपा विभाजन भएको हो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली सरकारमा सामेल हुने तयारी गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको समूह भने विपक्षी पाँच दलमा सामेल भएर आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्ष तत्काल ओली सरकारमा सहभागी हुँदैछ । ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री लिएर राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा १/२ दिनभित्रै सरकारमा सामेल हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
अघिल्लो लेखमाभियतनाममा भेटियो हावाबाट फैलने कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट
अर्को लेखमाविपक्षी दल भन्छन् : ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको निर्णय घर जलाएर खरानीको व्यापार